थाहा खबर: भरतपुरमा विजयसँगै उदाउला सूर्य वा रेनुसँगै अस्ताउला ?
हेटौंडा : नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहेको चितवनको भरतपुर महानगरपालिका नयाँ नेतृत्व चयनको दौडमा छ।
वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गतको मतदानको मतगणना भइरहेको भरतपुरमा सत्तापक्ष,प्रतिपक्ष,मतदाता र आमनागरिक सबैको चासो छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्वाचन क्षेत्र, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र रामबहादुर थापा बादलको गृह जिल्ला भएकोले पनि चितवन सधै चासोमा नै रहदै आएको थियो।
तर, प्रचण्ड पुत्री रेनु दाहाल भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर पदको उम्मेदवार भएपछि यसले थप चासो,चर्चा र चिन्ता बटुलेको छ। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि नै चितवनले नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय थलोको रुपमा महत्व पाइरहेको छ। प्रचण्ड पुत्री दाहाल अघिल्लो निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार भई निर्वाचित भइसकेको भएपनि यो निर्वाचनमा भरतपुर सबैको लागि अझ बढि महत्वपुर्ण बनेको छ।
भरतपुरको मेयरमा पुनः प्रचण्ड पुत्री दाहालको उम्मेदवारी पर्नु, जीत आफ्नो हातमा पार्न एमालेले प्रदेश सांसदलाई उभ्याउनु ,कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी पर्नु र सत्ता शक्ती सबै भरतपुरमा प्रयोग हुनुले यो निर्वाचनमा भरतपुरले थप महत्व पाएको देखिन्छ। प्रचण्डसहित सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षमा रहेको एमाले दुवैलाई भरतपुरमा जीत हात पार्नु प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। प्रचण्ड कुनैपनि हालतमा छोरीले जित्नुपर्ने पक्षमा छन् भने एमाले प्रचण्डको गृह नगरमा उनकै छोरीलाई पराजित गर्दै जीतको झण्डा फहराउन चाहन्छ।
उता नेपाली कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवार बनेका जगन्नाथ पौडेल आफूले जीत भेट्टाउन नसकेपनि गठबन्धनले उम्मेदवार बनाएको दाहाललाई नै पराजित गर्न चाहान्छन्। यसबीचमा भरतपुरमा चलिरहेको प्रतिस्पर्धाले कुन मोड लिएला ?भरतपुरको नेतृत्वमा कसले बाजी मार्ला ? भन्ने विषय सबैको चासोमा छ।
भरतपुरमा मतगणना सुरु भएको केहिदिन एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदी र गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी दाहालबीच रोचक प्रतिष्पर्धा चल्यो। यी दुई एकअर्कालाई अघि पछि पार्दै प्रतिष्पर्धामा होमिरहे। दुई जना बीचको प्रतिस्पर्धाले आक्रोशित र उत्तेजित दुवै पारेको देखिन्थ्यो। तर,पछिल्लो केहिदिन यता गठबन्धनकी उम्मेदवार दाहाल निरन्तर अग्रस्थानमा रहेकी छन्।
उनलाई पछ्याइरहेको एमाले उम्मेदवार सुवेदी दाहालसँगको दुरि घटाउने प्रयासमा रहेपनि दुरि बढ्दै गएको देखिन्छ। मतगणनाको पछिल्लो परिणामअनुसार सुवेदी करिब ७ हजार ४ सय मतले पछि रहेका छन्। सुवेदी बागमती प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका हुन्। मतगणनामा पछि परेका सुवेदीलाई पुनः ‘कमब्याक’ गर्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ।
हालसम्म भरतपुरको १८ वटा वडाको मत गणना सकिसकेको छ। हाल वडा नम्वर १९ र २० को मतगणना जारी छ। भरतपुरमा एमालेको गढको रुपमा रहेका केहि वडाहरू मतगणनना सकिसक्दा पनि सुवेदीले राम्रो मत पाउन सकेनन्। राम्रो मत पाउँदै प्रतिष्पर्धामा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरेको वडाहरूबाट नै सोचेजस्तो मत पाउन नसकेपछि उनी पछि परेका छन्।
भरतपुरको ११ नम्वर वडा सबैभन्दा धेरै मत भएको वडा हो भने सो वडालाई एमालेको गढको रुपमा चिनिन्थ्यो। अघिल्लो निर्वाचनमा यो वडाबाट एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले एक हजार एकसय भन्दा बढि मतले लिड गरेका थिए। तर,अहिलेको निर्वाचनमा गठबन्धनकी उम्मेदवार दाहालले नै एकसय ६९ मतले एमालेलाई नै लिड गरिन्।
भरतपुर महानगरपालिकाको २९ वडामा कुल १ लाख २७ हजार ५५६ मत खसेको थियो। खसेको मतमध्ये ८९ हजार पाँचसय मत गणना भइसकेको अवस्थामा सुवेदी दाहालभन्दा ७ हजार ४ सय मतले पछि पर्नुले उनलाई कमब्याक गर्न गाह्रो रहेको देखिन्छ। भरतपुरको १६,१७ र १८ नम्वर वडामा एमालेले राम्रो मत पाउने अपेक्षा गरेको थियो। १८ नम्वर वडा पहिलेको घर पनि भएकाले विजयलाई त्यहाँको बढी नै अपेक्षा गरेका थिए भने १६ र १७ नम्वर वडा छिमेकी भएकोले राम्रो मत पाएर लिड गर्ने अपेक्षा थियो।
तर विजयको आफ्नै वडामा पनि उनले राम्रो मत पाउन सकेनन्। वडाध्यक्ष एमालेले जिते पनि मेयरमा भने दाहालले नै राम्रो मत पाइन्। वडा नम्वर १९, २०, २१ कांग्रेसको गढ भएकोले त्यहाँबाट उनले खासै पाउन सक्दैनन्। वडा नम्वर २३,२७ र २८ राप्रपाको राम्रो मत भएको स्थान हो। राप्रपा र एमाले गठबन्धनमा भएकोले यी वडाबाट एमालेले राम्रो मत पाउन सके पुनः प्रतिष्पर्धा नयाँ मोडमा जानेछ। तर,यसअघि गणना भएको मतलाई हेर्दा राप्रपाले अन्य पदमा एमालेलाई मत दिएपनि मेयरमा रेनुलाई दिएको देखिन्छ। त्यसैले यी वडाबाट पनि विजयले अपेक्षाकृत मत पाउन सक्ने सम्भावना देखिदैन।
२६ नम्बर वडामा भने दुवै पार्टीले राम्रो मत आउने दाबी गरेका छन्। २७ एमाले र २८ मा माओवादी राम्रो छ। त्यस्तै २९ वडा दासढुंगा क्षेत्र भएकोले एमालेले राम्रो भोट पाउने दाबी गरेको छ। अझै एमालेले राम्रो मत पाउने अपेक्षा गरेका वडाहरूको मतगणना गर्न बाँकी नै रहेको भएपनि जीत हासिल गर्न भने मुस्किल देखिन्छ। गणना भइसकेका वडाहरूबाट पनि राम्रो मत पाउने अपेक्षा गरेपनि पाउन नसकेकोले गन्न बाँकी वडाहरूले पनि एमालेको अपेक्षा पुरा गर्ला भन्न सक्ने अवस्था छैन।
एमालेले गठबन्धनकी उम्मेदवार दाहालविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलसँग पनि गरेको अपेक्षा अनुसारको प्रतिफल पाउन सकेन। एमाले भूइँकटहरको धेरै मत आओस् भन्ने चाहन्थ्यो। एमालेका सुवेदीले भूइँकटहरले दाहालको मत जति काट्ने अपेक्षा गरेका थिए, त्यो अनुसार भूइँकटहरले मत पाइरहेको अवस्था छैन्।
उनले भूइँकटहरले दाहालको मत धेरै काटे आफू अगाडि बढ्न सक्ने र जित भेट्टाउन सजिलो हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर,भूइँकटहरले दाहालको केही मत काटे पनि दाहाललाई सुवेदी भन्दा अगाडि जानबाट रोक्न सकेको छैनन्।
सिद्धबाबा खण्डको दर्जनौ ठाउँमा पहिरो, सिद्धार्थ राजमार्ग अवरुद्ध